Foana ny Fasana Satria Velona i Jesosy! | Fiainan’i Jesosy
MATIO 28:3-15 MARKA 16:5-8 LIOKA 24:4-12 JAONA 20:2-18
IREO ZAVA-NITRANGA TEO AMIN’NY FASAN’I JESOSY
NISEHO TAMIN’NY VEHIVAVY MAROMARO IZY
Azo antoka fa taitra be ireo vehivavy tonga teo am-pasana, satria toa tsy nisy na inona na inona tao. Nihazakazaka i Maria Magdalena nankany amin’i “Simona Petera sy ilay mpianatra anankiray tian’i Jesosy”, dia ny apostoly Jaona. (Jaona 20:2) Nahita anjely iray ireo vehivavy nijanona teo am-pasana. Nisy anjely iray “nanao akanjo fotsy lava” koa tao am-pasana.—Marka 16:5.
Hoy ilay anjely iray: “Aza matahotra. Fantatro fa i Jesosy, ilay nofantsihana tamin’ny hazo fijaliana, no tadiavinareo. Tsy ato izy fa efa natsangana, araka ny efa nolazainy. Avia, jereo fa teo no nandriany. Mandehana haingana milaza amin’ny mpianany hoe: ‘Efa natsangana tamin’ny maty izy ary hialoha anareo any Galilia.’ ” (Matio 28:5-7) “Nangovitra sy nihetsi-po mafy” ireo vehivavy ireo ka nihazakazaka nilaza tamin’ireo mpianatra.—Marka 16:8.
Efa nahita an’i Petera sy Jaona i Maria tamin’izay. Mbola sempotsempotra izy nilaza hoe: “Nisy naka tao am-pasana ny Tompo, ary tsy fantatray izay nametrahany azy.” (Jaona 20:2) Tonga dia lasa nihazakazaka i Petera sy Jaona. Haingana kokoa i Jaona ka izy no tonga aloha tany am-pasana. Nitsikilo tao anatiny izy ary nahita an’ireo fehim-paty, nefa tsy niditra.
Tonga dia niditra kosa i Petera rehefa tonga ary nahita an’ilay fehim-paty sy ilay lamba natao teo amin’ny lohan’i Jesosy. Izay i Jaona vao niditra ka nino ny tenin’i Maria. Tsy azon’izy roa lahy hoe natsangana tamin’ny maty i Jesosy, na dia efa noresahiny aza izany. (Matio 16:21) Very hevitra izy ireo ka lasa nody. I Maria kosa niverina teo am-pasana ary nijanona teo.
Ireo vehivavy hafa indray nihazakazaka nilaza tamin’ny mpianatra hoe efa natsangana tamin’ny maty i Jesosy. Nifanena tamin’izy ireo i Jesosy ka nilaza hoe: “Manahoana ianareo!” Avy hatrany izy ireo dia “niankohoka teo anatrehany.” Hoy i Jesosy avy eo: “Aza matahotra! Mandehana milaza amin’ny rahalahiko mba ho any Galilia, fa any no hahitany ahy.”—Matio 28:9, 10; Lioka 24:8-10.
Nisy horohoron-tany talohan’izay ary nisy anjely niseho. “Tora-kovitra” àry ny miaramila teo am-pasana, ka “tsy nahahetsika toy ny maty.” Nankany an-tanàna izy ireo rehefa nahazo aina, ary “nilaza tamin’ny lehiben’ny mpisorona ny zava-nitranga rehetra.” Nikaon-doha ny anti-panahin’ny Jiosy sy ny mpisorona. Nanapa-kevitra izy ireo fa homena vola ny miaramila, mba tsy hitantara an’izay nitranga fa hilaza hoe: “Tonga alina ny mpianany nangalatra azy raha mbola natory izahay.”—Matio 28:4, 11, 13.
Nety ho novonoina ho faty ny miaramila romanina raha resin-tory teo am-perinasa. Nampanantena azy ireo àry ireo mpisorona hoe: “Horesenay lahatra ny governora raha reny izany [ilay lainga hoe natory izy ireo], ka tsy misy tokony hatahoranareo.” (Matio 28:14) Noraisin’ireo miaramila ilay vola ary narahiny ny tenin’ny mpisorona. Niely teo amin’ny Jiosy àry ilay lainga hoe nisy nangalatra ny fatin’i Jesosy.
Mbola nitomany teo am-pasana i Maria Magdalena. Niondrika nijery ny tao am-pasana izy ka nahita anjely roa niakanjo fotsy. Ny iray teo an-dohan’ilay nisy an’i Jesosy ary ny iray teo an-tongotra. Nanontany izy ireo hoe: “Nahoana no mitomany ianao, ravehivavy?” Namaly i Maria hoe: “Nisy naka ny Tompoko, ary tsy fantatro izay nametrahany azy.” Nitodika izy ary nahita olon-kafa. Namerina ny fanontanian’ireo anjely izy io ary nilaza hoe: “Fa iza no tadiavinao?” Noheverin’i Maria fa mpanao zaridaina izy ka hoy i Maria: “Mba lazao amiko, tompoko, izay nametrahanao azy hakako azy, raha ianao no naka azy.”—Jaona 20:13-15.
I Jesosy natsangana tamin’ny maty io niresahan’i Maria io fa tsy fantany. Fantany ihany anefa izy rehefa niantso azy hoe: “Maria!” Ilay fomba mahazatra firesahan’i Jesosy taminy no nahalalany azy. Faly be i Maria ary niteny hoe: “Rabôny!” (midika hoe “Mpampianatra!”) Namikitra tamin’i Jesosy i Maria satria natahotra sao efa hiakatra any an-danitra izy. Hoy anefa i Jesosy: “Aza mamikitra amiko fa mbola tsy niakatra tany amin’ny Ray aho. Fa mandehana any amin’ny rahalahiko ary lazao aminy hoe: ‘Miakatra ho any amin’ny Raiko sy ny Rainareo aho, ary ho any amin’Andriamanitro sy Andriamanitrareo.’ ”—Jaona 20:16, 17.
Nihazakazaka tany amin’ny toerana nivorian’ny apostoly sy ny mpianatra hafa i Maria avy eo, ary niteny hoe: “Nahita ny Tompo aho!” (Jaona 20:18) Efa nisy vehivavy hafa koa nilaza tamin’izy ireo hoe nahita an’i Jesosy. Noheverin’izy ireo fa “niteniteny foana” anefa ireo vehivavy ireo.—Lioka 24:11.
Rehefa hitan’i Maria Magdalena fa foana ilay fasana, inona no nataony ary inona no nitranga tamin’ireo vehivavy hafa?
Inona no nataon’i Petera sy Jaona rehefa hitan’izy ireo fa foana ilay fasana?
Iza no nifanena tamin’ireo vehivavy nandeha nilaza tamin’ny mpianatra, ary inona no nitranga rehefa niverina teo am-pasana i Maria Magdalena?
Ahoana no nandraisan’ireo mpianatra ny zavatra nolazain’ireo vehivavy?
Hizara Hizara Foana ny Fasana fa Velona i Jesosy!